Ogaden News Agency (ONA) – Daggaal Xoogan oo ka dhacay Kinisad ay ku tukadan Ethiopianka oo ku tala London
Daggaal Xoogan oo ka dhacay Kinisad ay ku tukadan Ethiopianka oo ku tala London
Gumeysiga Ethiopia oo Masaajida iyo Kiniisadaha ku yaala Dibadaha ka bilaabay olole siyaasadeed
Maxaa ku dhacay Culumadi Somaliyeed / Bal nala eega Qeysaska Ethiopia
Shacabka Somaliyeed waxa ay aad ugu wareersanayeen sanadihi lasoo dhaafay Nin sheekh ah oo lagu yiqiinay innuu masaajida Imaam ka noqdo oo bulshada kheyrka ugu yeedho ama muxaadarooyin ka bixiyo masaajida oo hadana u dhuumanaya Safaaradaha Ethiopia oo nin gaal ah u jaajuusaya isaga oo xaqiraya shacabka Ogadeniya ee gumeysiga Ethiopia ku hayo dilka dhaca iyo kufsiga. Waxaan wada aragnay culumadaas oo Jig Jiga intay ka daggaan sheegaya in horumar ka jiro dhulka Ogadeniya wax dil ah ama kufsi ah uusan ka jirin. Islamarkaasna ugu baaqaya dadyowga dibada ku nool inay Ogadeniya yimaadaan oo maal gashadaan. Bal hada eeg uguma baaqayaan inay Allaah ka cabsadaan balse inay maal gashadaan Ogadeniya ayay ugu baaqayaan Dunyo ayay ugu yeedhayaan. Dad badan ayaa arrintaas la yaabana.
Wali ma aragtay Nin Qeys ah oo Diinta Katoliga heysta oo Kiniisadihii ku yaalay wadamada ree galbeedka inta uu dadka soo shiriyo u sheegaya in cid Axmaar ah ama Ethiopian oo Jeel ku jirta aysan jirin. Inaga oo wada og kumanaanka kun ee wariyaasha iyo siyaasiyiinta ah ee ku jira Jeelasha waaweyn ee Addis ababa ee u xidhan arrimaha Siyaasada. Qeysaskan waxay sheegayaan arrintaas mid kasoo horjeeda waxayna dhahayaan Dowlada TPLF/EPRDF waa dowlad xaq ah oo horumarka dadka dhulka Ethiopia ka shaqeysa. Waa inaad dhulkiina maal gashataan oo aad safaarada ku xidhantaan si la idiin siiyo dhul aad maal gashataan.
Gumeysiga Ethiopia ayaa olole xoogan ku qaaday Kiniisadaha iyo masaajida dadka maamulkooda gacanta ku haya iyaga oo Qeysaska iyo Culumada heshiis qarsoon lagalay. heshiiskaas oo ah lacago iyo balan qaad maal iyo hanti deegaan isugu jira. Waxa gumeysigu uu ku amray dadkaas calooshood u shaqeystayaasha ah in Diinta ugu dhuuntaan shacabka geeska Afrika oo ah dad ku xidhan masaajida iyo kiniisadaha halkaasna loogu sheekeeyo waxyaalo ka soo horjeeda waaqiciga.
Hadaba Kiniisada Weyn ee ku taala magaalada london ayaa Safaarada Ethiopia waxay ku soo qaaday weerar dadkii ku tukan jiray. Safaarada Ethiopia ayaa lagusoo waramaya inay qeysaska kiniisada ay siisay lacago iyo balan qaadyo inay dhul kasoo dhisan doonaan Ethiopia. hadii kiniisada ay u gacan galiyaan maamulka Safaarada Ethiopia ee ku taala London.
Arintan ayaa waxaa ka mudaharaday dadkii ku tukan jiray Kiniisada oo cadho kulul kala hortagay maamulki Kiniisada iyo qeysaskii wax ka tukin jiray. Kadib markii ololaha safaarada Ethiopia si toos ah uga bilaabmay kiniisadi.
Waxaa shacabki kutakanayay kiniisatada ay halmar ku dhufteen sawaxan qeylo ah iyaga oo ku dhahaya Qeyskii war ilaahay maadan ka yaabayn meesha waxaan u imaanay inaan ku tukuno iyo Alla Bari. siyaasada aad ka hadlayso maxay tahay. Waxaa markiiba jawigii isu badalay mid cadho ah kadib markii maamulka kiniisada ay damiyeen nalkii si ay dadkii cabashada muujinayay qas ugu sameeyaan.
Waxaa kiniisada ku jiray haween waayeel ah iyo caruur badan. Waxaa shacabkii aad uga cadhooday dad diin sheeganaya inay albaabada u xidhaan kinisada nalkana ku damiyaan dadkii ku jiray kiniisada arrintaas oo halis iyo cabsi badan ku abuurtay caruurti iyo waayeelki.
Waxaa meeshaas soo dhex galay Sida dad ku tukunayay kiniisada noo sheegeen Poliska magaalada London. Waxaana maalin kasta yimaada Poliska magaalada London si dadka ay ugu tukudaan kiniisada isku dhacna u imaan.
Waxaa socda olole lagu badalay maamulka kiniisada ee la sheegay inay safaarada ku xidhanyihiin.
hoos ka daawo Filim daggaalki qadhaadha ee ka dhacay kiniisada kadib markii halkaas lagu fashilay isku daygii gumeysiga Ethiopia.